Ubuncinci beNgqondo ekuPhakameni kwePhepha leDijithali yokupeyinta | Izidalwa ezikwi-Intanethi
"Leyo ikhona kuphela engqondweni" ngokunyuka kwesaqhwithi, umzobo wedijithali
Kule veki besinomxube phakathi ukupeyinta ioyile yeklasikhi y kwikhekhe Ukusuka kubapeyinti ababini abagqwesileyo, uVicente Romero noAntonio Tordesillas kwelinye icala, kwaye yintoni eyidijithali ngesandla sika-Elena Sai kunye nayo ubuchule obugqwesileyo nge-Photoshop.
Kule nto emva kwemvula kunye namafu angwevu ngokujikisa iimvakalelo zethu, yeyiphi indlela ebhetele yokubhekisa kubomi obungapheliyo ngomsebenzi "Okhoyo kuphela engqondweni" ngokunyuka kwesaqhwithi. Umzobo wedijithali osisa phambi kwengcinga kwaye nendawo ephantse ibe nengenasiphelo apho kungekho mida okanye iingcingo ezibangela umda kwimibono namaphupha.
Awuyi kuba kuphela ngumculi oye wahamba kule mizila Sebenzisa isibizo okanye i-avatar ukuba saziwe, kuba ngalo mzuzu siyamazi umyili walo msebenzi ngegama elithi Ukunyuka kwesiqhwithi. Uphumelele kakuhle kwisiqwenga sedijithali esinayo kule mvakwemini.
Umlambo lowo kuhamba kwintaba kunye nokuzalwa kwayo Ukufumana isibhakabhaka esigcwele amafu anikezela ilanga elinokuthi liwele phantse ukutshona kwelanga, kodwa apho sifumana khona ukukhanya okukhulu.
Umsebenzi okhethekileyo ivulela abanye abaninzi beli gcisa ledijithali eziza kubonelela ngomsebenzi wobugcisa bealbham zomculo kunye nezinye iintlobo zemidiya. Ukuba ujonge phambili emsebenzini wakhe, uyakufumanisa ukuba unesilumkiso esibhakabhakeni, amafu kunye nokutshona kwelanga, phantse ibe yeyona nto aqhelene nayo kwingqokelela enkulu edlala oko nasemva kokuphelelwa.
Ungamfumana kwi facebook wakho y DeviantArt ukukulandela kwimisebenzi yakho ekumgangatho ophezulu yedijithali. Unalo nethuba loku thenga iziprints ukuba ufuna ukuba naye kwindawo ekhethekileyo ekhayeni lakho apho unokujonga ngokuthula kwaye ulahleke kwezo ndawo zingenasiphelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » "Leyo ikhona kuphela engqondweni" ngokunyuka kwesaqhwithi, umzobo wedijithali
Elunxwemeni lwekhekhe likaVicente Romero